लेख > जीवनको कुरा गर्दै > पाप र निराशा छैन?
पहिलो नजर मा, अनुरोध अविश्वसनीय लाग्छ। लुथरको चेतावनी बुझ्न हामीले प्रसंगलाई नजिकबाट हेर्नु पर्छ। लुथर पापलाई एक वांछित कार्य भन्दैन। यसको विपरीत, उनले यस तथ्यलाई स .्केत गरिरहेका थिए कि हामी अझै पाप गर्दछौं, तर ऊ हामी निरुत्साहित भएको चाहँदैनथ्यो किनकि हामीलाई डर छ कि परमेश्वरले हामीबाट उहाँको अनुग्रह फिर्ता लिनुहुनेछ। हामी ख्रीष्टमा हुँदा हामीले जेसुकै गरे पनि अनुग्रह पापको भन्दा सशक्त हुन्छ। यदि हामीले दिनमा १०,००० पटक पाप गरेका छौं भने पनि हाम्रा पापहरू परमेश्वरको असीम अनुग्रहको सामना गर्न शक्तिहीन छ।
येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदा, हामीलाई ख्रीष्टको उदाहरण अनुसरण गर्न भनिएको छ, परमेश्वर र छिमेकीलाई प्रेम गर्न। जबसम्म हामी यस संसारमा बाँचिरहेका छौं, हामीले पाप गर्ने समस्यासँग बाँचिरहेका छौं। यस्तो परिस्थितिमा हामीले डरलाई यति धेरै डुब्न दिनु हुँदैन कि हामी परमेश्वरमा विश्वासयोग्य छौं भन्ने भरोसा गुमाउँछौं। यसको सट्टामा, हामी परमेश्वरलाई हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्छौं र उहाँको अनुग्रहमा अझ बढी भरोसा राख्छौं। कार्ल बार्थले एक पटक यसरी लेखेका थिए: धर्मशास्त्रले हामीलाई पापलाई अझ गम्भीरतासाथ लिन वा अनुग्रहको रूपमा गम्भीरतासाथ लिन निषेध गर्दछ।
पाप गर्नु खराब हो भनेर प्रत्येक इसाईलाई थाहा छ। यद्यपि धेरै विश्वासीहरूलाई पाप गर्नुपर्दा कसरी व्यवहार गर्ने भनेर सम्झाउनु पर्छ। यसको उत्तर के हो? परमेश्वरमा कुनै रोकटोक बिना आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुहोस् र निष्कपटताका लागि क्षमा माग्नुहोस्। विश्वासको साथ अनुग्रहको सिंहासनमा प्रवेश गर्नुहोस् र निर्भयतापूर्वक विश्वास गर्नुहोस् कि उहाँले तपाईंलाई उहाँको अनुग्रह दिनुहुनेछ र पर्याप्त भन्दा पनि बढी।